Mmiri mmiri ozuzo: ihe ha bụ, otu ha si etolite na nsonaazụ ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Dika anyi matara, mmiri ozuzo bu ihe gbasara ikuku metutara uwa anyi. Ọ bụ ihe ọ bụla karịa ọdịda nke mmiri mmiri na mmiri mmiri, ngwaahịa nke odide na jụrụ nke vepo mmiri na ígwé ojii dị n'elu nke troposphere. A na-akpọ mmiri ozuzo mgbe ụfọdụ dị ka mmiri ozuzo, ọ bụ ezie na nke a na-ezo aka n'ụdị sara mbara karị. Ọgbọ nke mmiri ozuzo na-adabere n'ọtụtụ ihe: okpomọkụ, nrụgide nke ikuku na iru mmiri. Na Oke mmiri ozuzo ha bụ ndị na-eme n'ike n'ike na obere oge. Enwere ọtụtụ ajụjụ gbasara ụdị mmiri ozuzo a na otu esi esi amalite.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma banyere oke mmiri ozuzo, njirimara ha na otu ha si eme.
1 Mmalite nke mmiri ozuzo
2 Nhazi mmiri ozuzo
3 DANA na-eme ka mmiri zoo mmiri ozuzo
Mmalite nke mmiri ozuzo
Iji mara njirimara na mbido mmiri ozuzo, anyị kwesịrị ịghọta etu mmiri ozuzo si amalite. Mmiri ozuzo abụghị ihe ọzọ karịa akụkụ nke mmiri mmiri nke mmiri mmiri na-agbadata ma mee ya site n'oké osimiri, osimiri, ọdọ mmiri na ala ebe mmiri dị.
Mmiri ozuzo na-etolite n'etiti iche iche ụdị igwe ojii dị ka cumuloninbus na nimbostratus. Ndị a bụ igwe ojii na-anata imirikiti mmiri sitere na ikuku. Mgbe alụlụ mmiri dị elu wee rute elu, ha na-abụkarị mpaghara oyi. Nke a na - eme ka uzuoku na - agbakọta na mmiri ụmụ irighiri mmiri na - akpụ site na mgbakwunye hygroscopic condensation. Ngwurugwu ndị a nwere ike ịbụ ntụ ma ọ bụ ihe ndị a kwụsịrị na mbara igwe. Mgbe ha gbakọtara, ha ruru ibu nke ha si na ya na-adọta site na ike ndọda.
Nhazi nke mmiri ozuzo nwere ike ime n'ụzọ atọ:
Mmiri ozuzo: bụ ụdị mmiri ozuzo ndị ahụ nke ikuku na-ekpo ọkụ na-abanye na mbara ụwa ma kpalie ya site na mmetụta nke anyanwụ. Ozugbo o si n'ikuku bilie, ọ na-ajụ oyi ma mmiri ozuzo na-erukwa n'ihi odide nke ụmụ irighiri mmiri.
Mmiri mmiri ozuzo: bụ ndị a na-akpụ mgbe igwe ikuku dị jụụ jikọtara na enyemaka enyemaka ugwu. Ikuku a na-agbago ugwu ahụ ma na-ewepụta mmiri niile dị na ya ruo mgbe ọ na-agbadata kpamkpam n’akụkụ nke ọzọ nke ugwu ahụ.
Igwe mmiri ihu: Ha na-eme site na nkwekọ nke ikuku ikuku abụọ nwere okpomọkụ dị iche iche. Ọtụtụ mgbe ọ na-abụkarị otu mma na oyi ọzọ. Mmiri ozuzo a na-abụkarị ụdị oké ifufe ma ọ bụ ajọ ifufe.
Oke mmiri ozuzo: a na-akpụ ha site na iche nke okpomoku na elu ala. Ọ na -emekarị na njedebe nke oge ọkọchị ma ha bụ oke ifufe nke nwere ike dị ukwuu nke na-ebutekarị mmebi dị egwu, ọkachasị ọrụ ugbo.
Nhazi mmiri ozuzo
Ọtụtụ mmadụ na-eche ihe kpatara oke mmiri ozuzo na-amalite na ngwụsị oge ọkọchị. Obu ihe kwesiri na mgbe ikpeazu nke onwa ogugu enwere oke oke ikuku n’ime obodo ayi. Ọ bụkwa na mbido mmiri ozuzo a bụ n'ihi enweghị ike. Enweghi ike na-etinyekarị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke peninshula ya na oke mmiri ozuzo kariri 200 mm.
A na-amakarị usoro ndị a nke oke mmiri ozuzo n'otu oge dịka ntụ oyi. Ọ bụ naanị ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ọ bụla na gburugburu Oké Osimiri Mediterenian na n'oge a. Ha na-adịkarị n'etiti ụbọchị ikpeazụ nke August na izu mbụ nke Ọktoba. Nọmalị ọnwa nke Septemba bụ ka o yikarịrị ka e guzobere ha. Oké ifufe ndị a niile na-eme kwa ụbọchị n'otu ụbọchị anaghị adaba na ndabakọ, kama ụfọdụ ihe gbasara ihu igwe.
Isi ihe kpatara mmalite mmiri ozuzo bụ ọdịiche dị na okpomọkụ. Otu n’ime ihe ndị bụ isi kpatara ya bụ na ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ dị elu nke Oké Osimiri Mediterenian na ngwụsị oge ọkọchị dị iche na ụbọchị nke ala elu mmiri ahụ. Ná ngwụsị nke oge okpomọkụ, okpomọkụ nke Oké Osimiri Mediterenian dị ihe dị ka ogo 27, ọ bụ ezie na enwere ụfọdụ ndekọ nke okpomọkụ ruru ogo 31.
N'aka nke ọzọ, anyị ga-eburu n'uche na oge ọkọchị bụ oge nwere ọnọdụ ikuku ikuku kacha elu na mba anyị. Ọbịbịa nke oké ifufe na ọnwa okpomọkụ abụghị ihe a na-ahụkarị. Kaosinadị, na ngwụcha oge a, oke ikuku nke ugwu mgbago na-ebilite ma teta na ọnwa Septemba.
DANA na-eme ka mmiri zoo mmiri ozuzo
Mgbe anyị na-ezo aka na DANA ọ pụtara oke ịda mbà n'obi na ọkwa dị elu. Nke a yiri nke anyị na-akpọkarị akpa ikuku oyi dị elu. Mgbe ịda mba a n'ogo nwere ikuku oyi dị oke elu na mbara igwe mana na-enweghị onyinye nke ikuku oyi n'elu, Ọ dị nso na nso Oke Osimiri Mediterenian. Ebe ọ bụ na anyị nwere oke okpomọkụ ebe a, ọ bụ n'oge ụbọchị ndị a, anyị nwere nnukwu ọdịiche dị na okpomọkụ n'etiti ọkwa dị iche iche nke ikuku.
Ọdịiche a dị na okpomọkụ na-egosi enweghị nsogbu ikuku nke anyị na-ahụ na ikuku ikuku na-ebili na nnukwu udo, na-ejupụta na ngwa ngwa mmiri mgbe ha zutere ikuku oyi ma na-ebute oke ifufe. Dị ka anyị si mara, mgbe ikuku na-ekpo ọkụ na-arịgo n'akụkụ elu nke ikuku anyị na-achọta odide ngwa ngwa nke ụmụ irighiri mmiri. Ọ bụrụ na odide a emee na oke ọsọ, oké ifufe ahụ ga-abụ ihe ike karịa.
Na mgbakwunye na ihe anyị kwurula, ọ bụrụ na enwere nkụda mmụọ a dị elu nke dị n'ebe kwesịrị ekwesị ma rute onyinye nke ifufe sitere na mpaghara a, ọ bụrụ na anyị agbakwunye na ihe kpatara oke iru mmiri site na Oké Osimiri Mediterenian, anyị nwere ike inwe Ọnọdụ pụrụ iche nke mmiri ozuzo kpatara. Ha bụ mmiri ozuzo nke nwere ike ịkarị 300 mm. Enwere ihe ndekọ edebere na 1987 na mpaghara nke La Safor nwere oke mmiri ozuzo nke 500 mm kpatara oke mmiri ozuzo.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị ga-amatakwu banyere mmiri ozuzo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oke mmiri ozuzo